Mandavan-taona no ilana ny fanabeazana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mandavan-taona no ilana ny fanabeazana
Nanatontosa resadresaka niaraka tamin’ny mpanao gazety sy ireo mpikambana amin’ny safidy any amin’ny faritra ireo tompon’andraikitra ny alarobia 17 jolay tao amin’ny cite ambatonakanga, misy ny foiben’ity fiaraha-monim-pirenena ity.
Manodidina ny dimapolo teo ho eo no tonga niara-nifanakalo hevitra tamin’izany, na mpanao gazety na koa ireo mpikambana safidy avy any amin’ny faritra. Maro no resaka nivoatra tamin’izany. Manodidina ny fifidianana moa no tena nifantohana. Teo ny fahalainan’ny olom-pirenena nandeha nifidy, latsaka ambany ny tahan’ny mpifidy tamin’ny fifidianana izay ho solombavambahoaka farany teo. Ilana fanabeazana izany araka ny hevitra tapaky ny rehetra nandritra ny fihaonana. Hevitra nivoaka tamin’izany ny hanohizana ny fanabeazana mandavan-taona fa tsy hapetraka fotsiny amin’ny vanim-potoana hanaovana ny fifidianana fotsiny ihany. Hisy ny fidinanana ifotony handresen-dahatra ireo mpifidy mba handraisany andraikitra amin’ny fifidianana. Eo ihany koa ny fandresen-dahatra azy fa misy vokany amin’ny fampandrosoana ny fandraisany anjara amin’ny fifidianana. Olana maro koa no hita tamin’izany, rehefa nanontaniana ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Hcc amin’izay tokony hatao hampanan-kery ny fitoriana amin’ny fifidianana dia tsy nahitana valiny mahafa-po.
Ny fifidianana dia fototry ny demokrasia, ary koa fomba iray ahafahan’ny olom-pirenena mitsara ireo mpitondra mivantana, tsy izany anefa ny eto amintsika raha ny fahitana ireo fitoriana marobe nisy tamin’ireny. Asaina manara-maso ny olona fa tsy raisina ny fitoriany rehefa mahita ny tsy mety izy ireo. Araka izany dia tsy miaro ny rariny sy ny hitsiny ny lalanantsika ka tokony hampieritreritra ireo solombavambahoaka, sy ireo tompon’andraikitra samihafa. Ny mpitondra tsy miaraka amin’ny vahoaka manko dia mandeha an-jambany fotsiny ihany.
Airtel Madagascar et ESTI : Un partenariat ambitieux en faveur de la formation dans le domaine des télécommunications et du numérique - il y a 28 jours
Education : La Fondation Axian a construit des classes de préscolaires - il y a 1 moi